I-China ifuna ukubuyela eNyangeni kulo nyaka, ngeli xesha ngokuthunyelwa kwezityalo kunye nezinambuzane | Iindaba zeGajethi
Kuninzi ekuthethwe kulo nyaka uphelileyo malunga nokubanokwenzeka buyela enyangeni, umxholo ophindaphindiweyo okhangeleka ngathi yeyona njongo iphambili kuzo zonke iiarhente zasemoyeni kumazwe ahlukeneyo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, I-China ifuna ukuya kwelinye inyathelo.
Ukuba kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo i-NASA iqinisekisile umdla okhethekileyo wokubuyela kwisathelayithi, i-ESA yade yabhengeza ukusebenzisana neRoscosmos ukuqala imishini edibeneyo eya kubasa eMars, ngaphambili eyayidlula kwisathelayithi, ngoku yiChina ebhengeza ukuba uya kubuyela eNyangeni kwimishini ebizwa ngegama Chang'e.
1 I-Chang'e ligama i-China elibhaptize ngalo imishini eya kubenza babuyele eNyangeni
2 Eli iya kuba lixesha lokuqala ukuthunyelwa kwemishini kwelinye icala leNyanga
I-Chang'e ligama i-China elibhaptize ngalo imishini eya kubenza babuyele eNyangeni
Ngaphambi kokuya kwiinkcukacha ezithe kratya, xelela loo nto I-Chang'e ayisiyo imishini, kodwa yinkqubo entsonkothileyo esele isebenza ixesha elide kwaye apho ii-orbiters ezimbini kunye nomnini-mhlaba sele bethunyelwe eNyangeni.
Ekupheleni kwalo nyaka, njengoko bekucwangcisiwe, injongo entsha iya kuqala ngaphakathi kule nkqubo, nokuba ibe yeyiphi na uhambo oluya kweyona ndawo ikude yeNyanga luya kuqala, indawo engaziwayo apho funda i-geology yendawo kwaye uvavanye iimpembelelo zobunzima benyanga kwizinambuzane nakwizityalo.
Ukwenza olu vavanyo, ukwaziswa kufuneka kwenziwe apho inani elikhulu lembewu kunye nezinambuzane apho kuya kwenziwa khona isifundo ziya kufakwa kumhlaba omtsha, ngaphakathi kwesikhongozeli esenziwe ngealuminiyam. Ngokusekwe kwiingxelo ezenziwe ngu UZhang Yuanxun, Khokela umyili weekhonteyina:
Isikhongozeli siya kuthumela iitapile, imbewu ye-arabidopsis kunye namaqanda e-silkworm kumphezulu weNyanga. Iintshulube zinokuvelisa icarbon dioxide, ngelixa iitapile nembewu zikhupha ioksijini ngefotosinthesisi. Ngokudibeneyo banokuseka i-ecosystem elula eNyangeni.
Eli iya kuba lixesha lokuqala ukuthunyelwa kwemishini kwelinye icala leNyanga
Oku kuyakubikwa ukuba lityeli lokuqala ukujolisa koko kubizwa ngokuba Umzantsi wePole, ummandla wempembelelo enkulu kwi-hemisphere esemazantsi emalunga neekhilomitha ezingama-2.500 13 ubukhulu kunye neekhilomitha ezili-XNUMX ubunzulu. Kwelinye icala, iNyanga ngokwayo ichongwe njengeyona akhawunti inefuthe elikhulu kwaye yenye yezona zikhulu kwiNkqubo yeLanga.
Enye yeenjongo eziphambili zolu thumo, njengoko uqinisekile ukuba unokuthelekelela, ilele kumdla wenzululwazi kwi Jonga ukuba iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezisemhlabeni zingakhula kwaye zikhule ngomxhuzulane okhoyo eNyangeni ethi, njengoko kuchaziwe kumanqaku amaninzi, imalunga ne-16% yezinto ezikhoyo eMhlabeni.
Okwangoku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba sele zikhona izifundo ezenziwayo kwibhodi yeSitishi saMazwe ngaMazwe apho kuye kwagqitywa kwelokuba ukubonakaliswa kwexesha elide kwi-microgravity kunokuba nefuthe elibonakalayo kwimpilo. Into ofuna ukuyiphanda ngoku yile uthini malunga neziphumo zexesha elide ezinobunzima obuncinci.
Kwelinye icala, ukuya kwindawo eyaziwa ngokuba yi-South Pole Basin kunomdla okhethekileyo, kungekuphela ngenxa yobukhulu bayo obukhulu, kodwa ngenxa yokuba kukho oososayensi abaninzi abathi, kwiminyaka yakutshanje, bafumanise ukuba ingabamba isixa esikhulu somkhenkce. Namhlanje kuqikelelwa ukuba ezi zixa zininzi zamanzi zinokuba ziziphumo zeempembelelo zeasteroids kunye neemeteor ezishiye umkhondo wamanzi okwazi ukusinda kuba lo mmandla uhlala usemthunzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-China ifuna ukubuyela eNyangeni kulo nyaka, ngeli xesha ngokuthunyelwa kwezityalo kunye nezinambuzane
UDell uvuselela uluhlu lwe-XPS 13, kunye nescreen se-4K, iiprosesa ezintsha kunye nokunxibelelana okukhulu
Ezona zilumkiso zimbi zizalisekisiwe: I-GOT ayizukubuya kude kube ngo-2019